နောက်ကျောမှာ ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ပေါက်သလဲ၊ ဖယ်ရှားနည်း စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 21/05/2022 11:28 | ရိတ်လိုက်ပြီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု
အမျိုးသားများတွင် အလှတရား၏ စည်းကမ်းများကို တင်းကျပ်သော ပရိုတိုကောလ်များ ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ပိုမို ချိန်ညှိလာပါသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာဆံပင်. ဆံပင်အပြည့်နောက်ကျောနဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ဖိအားတွေကို ခံစားရတယ်ဆိုတာ မဆိုလိုပါဘူး၊ အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေတဲ့အရာတစ်ခုထဲကို မဝင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပေမယ့် သေချာပေါက် သူသိချင်တာက နောက်ကျောမှာ ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ပေါက်လာပြီး ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ
ဖြေရှင်းနည်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပူဇော်သမျှနီးပါးသည် ယာယီဖြစ်သည်။ လေဆာဖြင့် အမွှေးအမျှင်များကို ဖယ်ရှားခြင်းသာလျှင် ရေရှည်တွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို အမွှေးအမျှင်များနှင့်အတူ ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ကုသမှုတစ်ခုစီရဲ့ နည်းပညာပါ။ လိုချင်သောဘတ်ဂျက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။အနည်းငယ်မျှဆင်းရဲမည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံချက်နှင့်အတူချော့။
1 နောက်ကျောမှာ ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ပေါက်တာလဲ။
2.2 Depilatory မုန့်
နောက်ကျောမှာ ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ပေါက်တာလဲ။
အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဆံပင်ပိုရှိတတ်သည်။ Testosterone အဆင့်မြင့်မားမှုကြောင့်၊ ဆံပင်ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေသော ဟော်မုန်းတစ်မျိုး။ အမျိုးသားတော်တော်များများဟာ ဆံပင်ပိုထူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပိုထူတာ၊ သင်၏မျိုးရိုးဗီဇပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော် သေချာသည်မှာ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်နေရာမှ ခံစားရသည့် ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ hypertrichosis ဖြစ်ပုံပေါ်နိုင်သည်။ ဆံပင်တွေ အလွန်အမင်း ပေါက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ကျောအပါအဝင်။
အမျိုးသမီးများသည် အခြားသော ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာများကိုလည်း ခံစားနေကြရသည်။ သီဟသူတို့လည်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာ၊ အလွန်အကျွံဆံပင်ကြီးထွားမှု သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများမှာ အဲဒီနေရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျောဘက်။ Hirsutism သည် မကြာခဏဆိုသလို ပိုကြီးသောရောဂါ၏ လက္ခဏာတစ်ခု သို့မဟုတ် ရောဂါတစ်ခု၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများသည် polycystic ovary၊ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ hyperthecosis (သားဥအိမ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးလာ)၊ adrenal glands တွင်အကျိတ်၊ Cushing's syndrome (ပိုလျှံသော corticosteroids) သို့မဟုတ် အမျိုးသားဟော်မုန်းများထုတ်လွှတ်သော ဆေးဝါးအချို့ကို သောက်သုံးနေသည့် အမျိုးသမီးများတွင် ခံစားရနိုင်သည်။ ဒါတွေအားလုံးက ဆံပင်မွေးခြင်းကို ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။. နောက်ကျောမှာ ထားနိုင်တာက ရှားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေက ဆံပင်တွေကို လျှော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှု နှင့် endocrinologist သို့မဟုတ် မီးယပ်အထူးကု၏အကူအညီဖြင့် သင့်ဟော်မုန်းပြဿနာကို ကုသပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုလျှံဆံပင်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ အလှကုန် သို့မဟုတ် လေဆာ ကုသမှု။
အမျိုးသားများသည် အမျိုးအစားတစ်ခုခုရှိလျှင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဟော်မုန်း သို့မဟုတ် endocrine မူမမှန်ခြင်း။. သို့သော်၊ ကိစ္စအများစုတွင်၊ အပန်းဖြေရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ မြင်သာထင်သာရှိသော ဆံပင်များကို ပျောက်ကင်းစေသော အလှအပဆိုင်ရာ ကုသမှုများ။
၎င်းသည် လွယ်ကူလျင်မြန်ပြီး နာကျင်မှုမရှိသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. သင်လက်လှမ်းမမီနိုင်သောနေရာအားလုံးမှ ဆံပင်များကို ဖယ်ရှားရန် အခြားသူတစ်ဦး၏အကူအညီကို လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ စတင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ကတ်ကြေးအကူအညီဖြင့် ထူထဲပြီး ထူထဲသောဆံပင်အားလုံးကို ညှပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးသုံးသပ်ချက်၏အကူအညီဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် ၎င်းသည် ၎င်း၏ခေါင်းတွင် ဖြတ်တောက်မှုများစွာရှိသည်။ ဘလိတ်ဓားနဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်တာကို သတိရပါ။ နောက်ဘက်ဆံပင်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လုံးဝမဆွဲပါဘူး။ စစ်မှန်သော မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းကို ဓါးဖြင့်ရရှိပြီး ၎င်းကို မျက်နှာပေါ်တွင် မုတ်ဆိတ်ရိတ်သည့်နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ရပါမည်။
ငါတို့ရလိမ့်မယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဂျယ် သို့မဟုတ် အမြှုပ် နောက်ကျောတစ်ခုလုံးကို ခရင်မ်နဲ့ အုပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ဆံပင်၏ဦးတည်ရာသို့ ဓါးကို ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားသူတစ်ဦး၏အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုစီတွင် ဓါးကိုသန့်ရှင်းရန် စင်တစ်ခုအနီးတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
အကြံပြုလိုတယ် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပြီးနောက် ရေချိုးပါ။ ပျက်နေသောဆံပင်ကိုဖယ်ရှားရန်။ ပြီးရင်တော့ ပါးစပ်ကို ခြောက်အောင် သုတ်ပေးရပါမယ်။ ယားယံခြင်းများကို သက်သာစေရန် အမွှေးနံ့သာ မပါသော lotion ကို လိမ်းပါ။
ဒါဟာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး၏အခြားပုံစံဖြစ်ပါသည်, ရှိရာ ဆံပင်ကို ရိတ်ခြင်းကဲ့သို့ပင် လျင်မြန်စွာ ရိတ်သည်။ ဒီခရင်မ်တွေမှာ ဆံပင်ရဲ့ keratin ကို ထိခိုက်စေပြီး ပျက်စီးသွားစေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ခရင်မ်ကို အမွှေးအမျှင်ရှိသော အရေပြားပေါ်သို့ လိမ်းပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ထားလိုက်ပါ။ spatula ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားသည်။ ဤမုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းအမျိုးအစားဖြင့် ဆံပင်သည် ထွက်လာရန် အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီး သင့်အား မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရန် ကူညီပေးရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို အမြဲယူခြင်းသည် ပိုကောင်းပါသည်။
Waxing သည် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း၊ ဒါပေမယ့် အလွန်နာကျင်စေနိုင်တဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် ဆံပင်ကို ဖယ်ရှားခြင်း မခံနိုင်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ကျေနပ်စရာကောင်းတာက ဆံပင်က ထွက်လာဖို့ တော်တော်ကြာလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးအမျှင်များကို အဆုံးသတ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကြီးတဲ့ကုထုံးဖြစ်ပြီး ဆံပင်ပြန်မပေါက်အောင် ကုသဖို့ လပေါင်းများစွာကြာပါတယ်။ လေဆာသည် ဆံပင်မွေးညင်းပေါက်များကို ဖျက်စီးရန် ဧရိယာအတွင်း လိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်း။. ကိစ္စအများစုတွင်၊ လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းသည် အများအားဖြင့် အလွန်ထိရောက်သော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်း လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » နောက်ကျောမှာ ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ပေါက်လာပြီး ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ